Aluminum Window, Aluminum Door, Aluminum Daawaha Window, Aluminum Daawaha Door - Renshi
Shanghai Renshi Albaabada & Windows Co., Ltd waa soo saaraha xirfad iyo dhoofiyaha of daaqadaha iyo albaabada ayaa cilmi duurka this muddo ka badan 15 sano. Khadadka Our alaabta waxaa si weyn loo qaybiyey on suuqa kala aluminium iyo albaabka, louver aluminium, balustrade dhalooyinka iyo pool xayndaabka, iwm Our suuqyada waaweyn yihiin Australia, New Zealand, America iyo dalalka Yurub.
By waayo-aragnimo qani ah ee soo saaridda iyo dhoofinta, waxaan ku siin kara qorshayaasha design macquul ah, waayo nooc oo dhan of guryaha la degan yahay iyo dhismayaasha ganacsiga. Ka sokow, hoos mustawe aad u adag, our tayada iyo adeegga loogu balan qaadayo. Taasi waa sababta aynu ayaa badisay sumcad wanaagsan iyo macaamiisha adduunka.
Waxaan si daacad ah u soo dhaweyn macaamiisha iyo hadda nala soo xiriir ganacsi mustaqbalka ee ku saabsan labada!
Codso xigasho online
fursadaha kala duwan
Dooro qaabka ugu fiican ee decoration ugu fiican ee gurigaaga.
No.135 Yanda Road, Huinan Town, Degmada New Pudong, Shanghai, Shiinaha